Microsoft word မှာ password ဖြုတ်ချင်လို့ပါ - MYSTERY ZILLION
Microsoft word မှာ password ဖြုတ်ချင်လို့ပါ
May 2010 edited July 2010 in DTP
I want to remove my password in word file.
How can i do and which software can i use?
I must be open and print file very important.
Please ,Somebody can help me?
Passware Kit ကိုစမ်းကြည့်ပါ အဲဒီ့ကောင်ကတော့ Office Doc အတော်များများ လွယ်လွယ်နဲ့ဖြည်လို့ရပါတယ်။ ရှာပေးလိုက်ပါတယ် ရမရတော့စမ်းသာကြည့်ပါတော့။ မရရင်လည်းထပ်ပြော နောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်ပေးပါ့မယ်။
Office Password Recovery Magic 6.1.1.175 ( 2.3 MB)
အစ်ကို software က ခန့်မှန်းခြေ / ဖြစ်နိုင်ချေ တွေ ရှာတာချည်းနော်။
ကျွန်တော်က password သိကိုမသိတာဆိုတော့ အဆင်မပြေဘူးဗျာ။
ကျွန်တော် အပေါ်မှာရေးတာ လောသွားလို့ လိုသွားပါတယ်.password လုံး၀မသိတာကို ဖြည်ချင်တာပါ။
အစ်ကို့ software က ဖြည်ချင်တဲ့ ဖိုင်ကို ရွေးပြီး start လုပ်ရင် register လုပ်ခိုင်းနေပါတယ်။
zawkalay wrote: »
ကိုလူပျိုကြီးပြောတဲ့ကောင်နဲ့စမ်းကြည့်ပါဗျာ။ ကျွန်တော်သုံးကြည့်ဖူးပါတယ်။ အဆင်ပြေပါတယ်။ pw က တအားstrongဖြစ်နေရင်တော့ မသိဘူးဗျ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စမ်းတော့ကြည့်လိုက်ပါဦး။
pdf က pw လည်းအဲဒီကောင်ဖြည်ပေးပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေ။
Microsoft word 2007 ကို pdf,jpg အဖြစ်တိုက်ရိုက်ပြောင်းချင်ပါတယ်.. သိရင်ပြောပြပေးပါ...
Pagemarker ကို pdf or jpg အဖြစ်ပြောင်းချင်ပါတယ်...
MS word 2007 save as မှာ PDF or XPS ပါတယ်လေ...
Microsoft word 2007 ကို pdf အလွယ်ကူပြောင်းနိုင်တဲ့ software လေးလိုချင်ပါတယ်
thawlaythawlay wrote: »
Acrobat Distiller 5.0(Printer) Software ကို Install လုပ်ထားပြီး pdf ပြောင်းချင်တဲ့ word မှာ Print > Acrobat Distiller ရွေးပေးလိုက်ရင် pdf file save လုပ်မယ့်နေရာမေးတဲ့ Box ကျလာပါလိမ့်မယ် ။
သိမ်းချင်တဲ့နေရာ ရွေးပြီး save ကို နှိပ်လိုက်ရုံပါဘဲ ။ Software file size က 28MB နီးပါးရှိပြီး တင်မရသေးလို့ သဘောတရားကို အရင်ပြောပြထားတာပါ ။ တင်ပြီးတဲ့အခါ ထပ်ပြောပါ့မယ် ။
htetkaung wrote: »
Acrobat Distiller 5.0(Printer) Software .....
...တင်ပြီးတဲ့အခါ ထပ်ပြောပါ့မယ် ။
အောက်က Link မှာ download လုပ်လို့ ရပါပြီ ။ အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ် ။
Microsoft Save as PDF and XPS add-in: